Ukuhlolwa Kokungavisisani Kwezimvo zika-Airbnb - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Inkcazelo eqhelekileyoisihloko soncedo
Ukuhlolwa Kokungavisisani Kwezimvo zika-Airbnb
Njengoko intsapho nezinto zakwa-Airbnb zisiya zikhula, sisazimisele ukuyihlaziya le polisi xa kufuneka, ukuze siqinisekise ukuba izimvo zichaza inyani yokuba bekunjani kubabuki zindwendwe nakwiindwendwe.
Sikholelwa ukuba inkqubo yezimvo esebenza kakuhle yileyo ezihloniphayo nezikhuselayo izimvo eziyinyani zentsapho yethu. Ngenxa yeso sizathu, sikuhoye kakhulu ukususwa kwalo naluphi na uluvo. Ungafunda Ipolisi Yezimvo Yakwa-Airbnb epheleleyo, kodwa ngamafutshane, oku kuthetha ukuba uluvo lusenokususwa ukuba:
Olo luvo lwaphula Ipolisi Yezinto Ezifakwayo,
Olo luvo luyakhetha,
Olo luvo alunanto yakwenza nokuba bekunjani kuAirbnb kuloo mntu ulubhalileyo, okanye
Olo luvo lunento yokwenza nokubhukisha okurhoxisiweyo.
Ukuhlolwa ukuba alukhethi
Intsapho yethu incedakala kakhulu xa izimvo zichaza ngaphandle kokukhetha ukuba bekunjani kwelo lungu. UAirbnb uyazisusa izimvo xa zinokukhetha - ngokomzekelo, kuba lo mntu ushiya uluvo uzama ukufumana imali kulo mntu ashiya uluvo ngaye, unenye into afuna ukungenelwa kuyo okanye ukhuphisana nalo mntu ashiya uluvo ngaye.
Ukufuna ukubhatalwa imali okanye ukucenga ngemali
Nakuphi na ukuzama ukusebenzisa izimvo okanye iimpendulo kwizimvo ukuze unyanzele umntu ukuba enze into anganyanzelekanga ukuba ayenze, kukuzisebenzisa kakubi izimvo kwaye asikuvumeli.
Abantu abasebenzisa uAirbnb abavumelekanga ukudibanisa izimvo ezintle nokunikwa imali okanye bagrogrise ngokushiya izimvo ezimbi ukuba le nto bayifunayo abayinikwa. Ukwaphulwa kwale mithetho kunokuphumela ekubekelweni imiqathango, ukunqumamiswa okanye ukucinywa kweakhawunti yakho ka-Airbnb.
Le polisi ayikuvumeli:
Ukuba iindwendwe zigrogrise ngokusebenzisa izimvo okanye imilinganiselo ukuze zinyanzele umbuki zindwendwe ukuba abuyise imali, azinike imali engakumbi okanye ukuba naye makazinike izimvo ezintle.
Ukuba ababuki zindwendwe bafuna iindwendwe zishiye uluvo okanye umlinganiselo omhle okanye zilungise uluvo ukuze babuyise inxalenye okanye yonke imali okanye nabo bashiyele iindwendwe izimvo ezintle. Ababuki zindwendwe abanakunika undwendwe indawo simahla okanye ngesaphulelo luze lona undwendwe lulungise uluvo olusele lufakiwe.
Ukuba ababuki zindwendwe okanye iindwendwe bacele umntu enze into ethile enokwenza noluvo ukuze kulungiswe ingxaki.
Le polisi ayikwaleli:
Ukuba undwendwe luqhakamshelane nombuki zindwendwe xa lunengxaki ngaphambi kokushiya uluvo.
Ukuba umbuki zindwendwe okanye undwendwe lufune ukubuyiselwa imali okanye imali engakumbi luze lushiye uluvo - xa olo luvo lungasetyenziselwa ukugrogrisa ukuze kutshintshwe indlela ingxaki eza kulungiswa ngayo.
Ukuba umbuki zindwendwe acele undwendwe ukuba lushiye uluvo oluthetha inyani oluhle okanye umlinganiselo ochaza ukuba nexesha elimnandi.
Ukuba umbuki zindwendwe okanye undwendwe lulungise uluvo xa ixesha likuvumela oko.
Ukuba nenye into ofuna ukuncedakala ngayo
Siza kuzisusa izimvo xa kukho izinto ezibonisa ukuba bekubhukishwe ukuze kunyuswe umlinganiselo xa uwonke waloo mntu okanye sikrokrela ukuba khange kuhlalwe kuloo ndawo.
Ukwamkela ukubhukisha okungeyonyani ukuze ufumane izimvo ezintle, ukusebenzisa iakhawunti yesibini ukuze ushiye uluvo ngesiqu sakho okanye indlu yakho okanye ukunika umntu into enexabiso ukuze ufumane izimvo ezintle akuvumelekanga. Ukwaphulwa kwale mithetho kunokuphumela ekubekelweni imiqathango, ukunqumamiswa okanye ukucinywa kweakhawunti yakho ka-Airbnb.
Izimvo zabantu abakhuphisanayo
Izimvo ezibhalwe ngabantu abakhuphisanayo (ngokomzekelo, amashishini, izindlu okanye izinto ezinokonwatyelwa ezikhuphisanayo) ukuze benze abanye abantu bangazibhukishi ezo zindlu okanye izinto ezinokonwatyelwa okanye ukuze batsale abantu baye kwezinye izindlu okanye izinto ezinokonwatyelwa, azivumelekanga. Ukwaphulwa kwale mithetho kunokuphumela ekubekelweni imiqathango, ukunqumamiswa okanye ukucinywa kweakhawunti yakho ka-Airbnb.
Ukwaphulwa komthetho weepati
Sisenokuzisusa izimvo kwezinye iimeko apho iindwendwe zingazifikelelanga izinto ezilindelekileyo ezichazweKwipolisi yethu Yeepati Namatheko ngoxa zisahleli. Sithembele kubabuki zindwendwe bethu ukuba benze izinto ezifunekayo ukuze bazame ukuyiphelisa ipati ingekabi yingxaki yokhuseleko okanye iphazamise abanye engingqini. Kodwa ke, siyaqonda ukuba ukuphelisa ipati kunokwenza umbuki zindwendwe afumane uluvo olubi ngendlela engafanelekanga. Ukuze sikukhuthaze ukwenziwa kwento efunekayo kuze kunciphe amathuba okufumana izimvo ezikhethayo, uluvo londwendwe lunokususwa xa umbuki zindwendwe enikezele ngenkcazelo eyaneleyo yokubonisa ukuba kuye kwaphulwa Ipolisi Yepati Namatheko. Kodwa ke, ezi zimvo azizukususwa ukuba zinenkcazelo ebaluleke kakhulu enokuzinceda kakhulu iindwendwe zexesha elizayo.
Ukuhlolwa ukuba iyanceda
Izimvo zinceda amalungu entsapho afumane inkcazelo namacebiso okuwanceda enze izigqibo zokubhukisha ezingcono. Izimvo zinceda kakhulu xa umntu ofaka uluvo echaza ngendlela echanileyo ukuba bekunjani aze ashiye izimvo eziyinyani.
Xa uluvo lunenkcazelo engenanto yakwenza nokubuka iindwendwe okanye ukuba lundwendwe okanye xa luthetha kakhulu ngento ebengenakuyilawula lo mntu kushiywa uluvo ngaye, iqela lethu lokuhlola liza kuhlola ukuba luyanceda na ngezi zinto:
Olu luvo luchaza ukuba bekunjani kulo mntu ulufakileyo luze luchaze ukuba ubona njani yena?
Olu luvo luyawanceda amanye amalungu entsapho yakwa-Airbnb? Lunenkcazelo ebalulekileyo ngombuki zindwendwe okanye undwendwe, indlu okanye into enokonwatyelwa enokunceda abanye babhukishe benolwazi olungakumbi?
Ukuba uAirbnb ugqiba ekubeni olo luvo aluloncedo ngombuki zindwendwe okanye ngondwendwe, indlu okanye into enokonwatyelwa, olo luvo lusenokususwa. Izimvo ezinenkcazelo eninzi engeloncedo nazo zisenokususwa, kodwa kuphela xa inkcazelo ekhoyo eluncedo bekungena kulindeleka ukuba incede amanye amalungu entsapho abe nenkcazelo engakumbi xa ebhukisha.
Imizekelo yokwaphulwa komthetho wenkcazelo eluncedo nengeloncedo
Ayiloncedo: "Ungabathembi oonotaxi besi sixeko, bathatha ezona ndlela zimbi!"
Iluncedo: "Ungabathembi oonotaxi besi sixeko, bathatha ezona ndlela zimbi! Ngaphezu koko, ndifike kule ndlu ingalungiswanga kakuhle tu kwaye umbuki zindwendwe khange andiphendule.
Ayiloncedo: "Olu ndwendwe beluxoka kakhulu. Akunakwenzeka ukuba ungugqirha wamanyani. "
Iluncedo:"Olu ndwendwe lufike emva kwexesha lokubhalisa xa lufika ibe luye lwandingxolisa ngokungakhawulezi ndivuke ukuze ndiluvulele. Ebekrwada kwaye echaphuka msinya lonke ixesha ebelihleli. Andinokukuvuyela ukumbona ukuba uba njani xa ekhathalela abantu. "
Ukuhlola ukubhukisha okurhoxisiweyo
UAirbnb ukuvumela ukuba ufake izimvo zakho zako nakuphi na ukubhukisha okurhoxiswe emva ko-12:00 kusasa ngosuku lokubhalisa xa ufika. Sikwenza oku ukuze siqokelele izimvo ngawona maxesha abalulekileyo kuhambo, nokuba oko kuthetha ukufumana izimvo ngokuncokola, ukwaphulwa kwemithetho yekhaya, iingxaki kwindlu ngexesha lokubhalisa xa ufika, njl.
Ukuba ukhetha ukushiya uluvo lokubhukisha okurhoxisiweyo, sicela ukuba uluvo lwakho luchaze ukuba bekunjani kuwe. Kwiimeko apho uAirbnb anokuqinisekisa ukuba kushiywe uluvo lokubhukisha okurhoxisiweyo, kwaye olo luvo lunenkcazelo engazukuyinceda intsapho yethu (ngokomzekelo, ukukhathazwa kukurhoxiswa kohambo ngepleyini, njl), olo luvo lusenokususwa.